Cayaaraha / Codsiyada / Mighty Qalabka WEB / IoT Horumarinta - Ka bax haddii horumarinta ciyaarta, codsiyada, nidaamka WEB, horumarinta iyo hawlgalka IoT!
Nidaamka WEB / Ari / IoT horumarinta dareenka
Taageerida dejinta VR-ga · Adeegga wax soo saarka qaybta
Facebook (rasmi ah)
Shiineys (Si fudud)
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee Mighty Craft
[Press release] Super Real Mahjong P8 sii daayay
Agoosto 22, 2018
Julaay 22, 2018
Waxaan soo saarnay codsi gudbin fax ah
Julaay 10, 2018
Waxaanu ku taageeri doonaa inaad ku xirto adeega dejinta ee aan taageelin TLS 1.2
Adeegga Dragon Shogi Online (adeegga Futurephone) waa la joojinayaa
Abriil 1, 2018
Waa shaqo ee Mighty Craft
Codsiyada casriga ah (iPhone / Android), ciyaaraha bulshada iyo ciyaaraha macaamiilka, fadlan noqo mid joogto ah oo ay ku jiraan qorsheynta mashruuca, kaabayaasha adeegga, horumarinta codsiga, maareynta dhacdada. Waxaanu bixinnaa barnaamij tayo leh oo degenaasho leh oo leh naqshadeena mobile-ka ah. Waxaan sidoo kale bixinnaa ciyaaro loogu tala galey dibada mihnadeed, fadlan nala soo xiriir annaga oo nala soo xiriiri doona waddan kasta.
Waxaanu bixinnaa adeeg hal-joojin ah oo ka-yimaada qorsheyn ~ habka wax soo saarka ~ cusbooneysiinta ~ Waxaan ka jawaabi doonnaa xawaaraha jawaab-celinta ee soo-saarka gudaha iyo sidoo kale soo-saarka iyo hawlgalka sida ku xusan koritaanka goobta kuxiran macaamiisha daruuriga. Waxaan leenahay rikoodh dabeecad badan oo ka mid ah goobaha casriga ah, codsiyada HTML, horumarka SNS, dhismaha PC, dhismaha daruuriga iyo hawlgalka.Waxaan ka qaban karnaa mashaqada culeyska, dhibaatada baaritaanka / waraaqaha, dib u celinta serverka iwm. Fadlan weydiiso sida lammaanaha shirkaddaada oo dhan. Waxaan haynaa guulo badan oo ah codsiyada shabakadda codsiga ganacsiga!
Waxaan soo bandhigi doonnaa waxqabadka VR, abuurista nidaamka madadaalada VR, iwm.
Laga soo bilaabo MightyCraft kaas oo ku wanaagsan ciyaaraha bulshada, brand new focus on codsiga casriga ah, tiknoolajiyada technology demonstri u muuqdaan! Haddii ay u muuqato xiiso xitaa fursado yaryar waxa ay qaabeyneysaa! Iyada oo ay tahay meel lagu helo tiknoolajiyad xoog leh "Mighty Craft" oo iimaan leh, waxaan sii wadi doonaa inaan ka sii wado mustaqbalka "guul studio" mustaqbalka!
Waxaan soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah wax soo saarkeena. Waxaa jira in ka badan 400 oo codsi oo loogu talagalay codsiyada iyo in ka badan 50 goobood oo loogu talagalay nidaamyada shabakadda.
Waxyaabaha mobile-ka ah
Makhaayadda raaxada ee Kokkuma
Darawalkii Dragon ee weerarka
Jardiinada Kubadda Cagta
Library Escape VR
Maqaalka farsamada ee farsamada gacanta
Ka samee barkada Chatwork (1) - webhook leh php
Waxaad isticmaali kartaa webhook for Chatwork API / Haddii aad leedahay webhook waxaad ku dari kartaa Chatwork / Isticmaalka webhook Preconfiguration / Hubi xogta ay soo direen webhook ee PHP[...]
Waxay hoos u dhigtaa xawaaraha socodka Sapporo iyo DS-Lite (IPv6 IPoE)
Xafiiska Sapporo, khadka dhaadheer ee Fiktoorka ee NTT ayaa hoos u dhigey xawaaraha xawaaraha FLET. Nooca FLET'S waa nooca guryaha 100 Mbps. Maalin maaliyadeed ma ahan wax badan, laakiin hoos u dhaca xawaaraha ka dib fiidkii waa shaqo ku xiran maalinta[...]
Dib u habee qaybta Linux (xariiq talbi)
Awoodda warbaahineed ee dhowaan waxay sii kordhaysaa, halkii ay ka noqon lahayd qiimo hoose. Marka la barbardhigo waraaqaha kaydka iyo waraaqaha xusuusta dhowr sano ka hor, qiimaha waa dhowr jeer awoodda iyo qiimaha waa jajab. Waqtigaan, waxaan kumbuyuutarka oo dhan u rogay qalab ballaaran[...]
Keeni Cygwin hadda Windows XP hadda
Waa jaantuska Wanna Cry oo ah fayras madax furasho ah (Ransomware), waxaana la ogaaday in Windows XP ay weli tahay mid firfircoon aduunka. Inkasta oo Microsoft ay tahay in ay ka baxdo taageerada, Microsoft ayaa sidoo kale soo saara sharooto. Haa, aniga[...]
Ku xir Yamaha NVR 500 ilaa Macaamiisha SIP ee Hikari Denwa
Waa N of Tokyo xafiis. Waxaan isku dayey isku xidhka Route Yamaha "NVR 500" oo ah macaamil SIP ah "Hikari Denwa router" PR - S300NE ". Dhabarka waa "Rikoorka Hikari Denwa" NTT wuxuu sameeyay "PR - S300NE". Gacanta[...]
VR jadwalka jilitaanka smartphone
Waa Z oo ah xafiiska Sapporo. Raadinta booska waxaa lagu ogaaday aaladaha casriga oo qayb ka ah cilmi baaris gudaha ah. Waxyaabaha aan rabo in aan sameeyo waa in la ogaado jagada dhaqdhaqaaqa sida socodka iyo isku xirida shaashadda VR (xaqiiqada dhabta ah). Iyadoo casriga ah oo kaliya,[...]
Kobcinta moodooyinka aan ku haboonayn Windows 10
Waa N of Tokyo xafiis. Xilliga cusbooneysiinta bilaashka ah ee Windows 10 ayaa la qorsheynayaa in uu noqdo 29-ka July, sidaas darteed dib-u-kicinta gudaha ayaa ah mid ballaadhan. Windows 10 ayaa si ku meel gaar ah loo geliyaa mashiinno aan la isticmaalin, laakiin Windows 10 maahan mid ku habboon[...]
Taageerada DB ee xajmiga ayaa leh FuelPHP
Waa K oo ah xafiiska Sapporo. Dhaqan ahaan, abuuritaanka nidaam adeeg bixiye (LAMP environment) wuxuu diiradda saarey horumarinta qaab-dhismeedkiisa, laakiin sanadihii la soo dhaafay ayaa la isticmaalay qaabab badan oo furan oo furan. Nidaamkayagu sidoo kale maaha mid xun[...]
Waxa aanad ku sameyn karin Unity WebGL
Waa G oo ah xafiiska xafiiska ee Tokyo. Waxay muddo dheer socotay tan iyo markii Unity la xidhiidhay WebGL, laakiin waxay u muuqataa inay ahayd mid aad u macquul ah oo ku saabsan Japan oo ku saabsan WebGL maanta. Maanta waxaan ku jiraa xadka aan sameeyay, laakiin Unity WebG[...]
Abuur 3D-ka ah sawir leh 123D qabashada oo muujiya Midnimo
Waa O ka mid ah xafiiska Sapporo. Waxaan abuuray moodooyinka 3D iyadoo la adeegsanayo AutoDesk 123D Catch iyo isku dayeen inay muujiyaan dhaqdhaqaaqa Midnimada. 123D Catch waa codsi kaas oo kuu ogolaanaya inaad abuurto macluumaadka moodeelada 3D oo sawirro ah[...]
Xarunta dhexe: 〒 171 - 0022
Xafiiska Sapporo: 〒 060-0809
Hokkaido Sapporo Magaalada Kita-ku Waqooyi 9 - Galbeedka 4 - Kaluun 10 - 3 Galleria 2 F
Xuquuqda (C) 2018 Mighty Craft Co.